१२ बजे राती चि'हान खनेर चम'त्कार गर्ने झाक्रीलाई भब्य स्वागत र सम्मान - Babal Khabar
January 21, 2021 by बबाल खबर
रातको १२ बजे चिहा’न अर्थात मसा’न घा’टसम्म कोहि पुग्न सक्छ होला!? अनि म’रेको छ बर्ष बि’तेपछी उसको आ’त्मा फेरि भड्कि”एर हिड्छ होला त! कसैले पत्याउनै नसकिने घट’ना मोरङको बेलबारिमा घ’टेको छ । एका’एक सबै गाउँले बि’रामी पर्दै आत्मा पसेर दुख दिन थालेपछि गाउँ नै चि’न्तामा परेको छ । करिब छ बर्ष अगाडी मृ’त्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बिरा’मीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्र’सित बनेको छ ।
बच्चादेखि वृद्ध सबै बि’रामी परेपछी धामी ले चि’न्ता बस्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि केही गाउँलेहरुले धामीलाई कु’टपि’ट समेत गरेका थिए । चार दिन चार रात नसुती धा’मी बसेर ढ्या’ङ्रो बजाए पछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दु’र्घ’टनामा नि’धन भएका जीवन राईको चि’हान ख’नेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुर’क्षा’कर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रात’को १२ बजे चिहा’न खनेर हेर्दा कसैले नसोचेको दृ’श्य देखिएपछी सबै गाउलेहरुले धामीलाई मा’फी मागेका छन ।
नि’डर अनि ज्यानै जो’खिममा राखेर सफलता पाउने झाक्रीलाई भ’गवान मानेर आज पुरै गाउँलेहरु धा’मिको भब्य स्वागत र सम्मानमा जुटेका छन । करिब तीन सय घर भएको बस्तीले सम्मान गरेका छन । घट’नाको भित्री रहस्य अनि सुरु देखिको सम्पुर्ण नालीबेली गाउलेहरुले सुनाउदा सबैको आँ’खा रसायो । आत्माले यस्तोसम्म गरेको रहेछ तलको भिडियो हेर्नुहोस तपाइँको हो’स उड्ने’छ ।
Prevरबि लामिछानेद्वारा न्युज २४ छाडेको घोषणा,
nextखुशीको खबरः यति लाख म्यादी प्र’हरीको भर्ना खोलिँदै, मासीक तलब यती